आज हेर्नै पर्ने भिडियो, यस्तो नानी भेटियो, सानो उमेरमा ठुलो काम Bhagya Neupane New Video, Prensa Regmi - Onlines Time
३० वर्षदेखि घरमै हुनुहुन्छ । गीत–संगीत कस्ता र कत्तिको सुन्नुहुन्छ ?
अलिअलि सुन्छु । हिन्दी, उर्दू गीत–गजल बढी सुन्छु । नेपाली पनि सुन्छु । छोराहरू सत्य–स्वरूपले आफ्ना गीतहरू सुनाए भने राम्रो/नराम्रो भन्दिन्छु । उनीहरूलाई गाइड गरिरहेको हुन्छु । एउटा मात्रै गीत राम्रो भएर प्रगति हुँदैन । मैले दुइटा गीतमा संगीत पनि गरें, ‘आचार्य’ चलचित्रका ‘आगोको राप जीवन…’ र ‘पर्ख, पर्ख…’ मा ।
नेपाली संगीतको अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ ?
सुर, शब्द र संगीतको थोरै ज्ञान भएकाहरूको हालिमुहाली छजस्तो लाग्छ । जस्तो पनि गीत, जस्तो पनि संगीत र जस्तो पनि गायकी हुँदैन । खासमा संगीतमा ‘असुर’ (बेसुरा) हरूको राज छ ।
गीतको पनि साहित्यिक मूल्य हुन्छ । त्यो कस्तो हुनुपर्छ ?
खासमा साहित्यको चेत भएको कविको गीत निकै शक्तिशाली हुन्छ । तुक्का जोड्दैमा गीत बन्दैन । अहिलेभन्दा पहिलाको लेखाइ राम्रो थियो ।
समकालीन कवि, लेखकहरूको संगत र उनीहरूका सृजना गाइएनन् भने त्यो समयको सृजना जीवन्त हुँदैन । तपाईंले आफ्ना समकालीन कविहरूका गीत किन कम गाउनुभयो ?
नगाएको होइन, गाएको छु । ईश्वरवल्लभ, क्षेत्रप्रताप अधिकारी, दिनेश अधिकारीहरूका गीतमा संगीत गरेर गाएको छु । बढी संगत गरेर होला, ईश्वरवल्लभ साँच्चिकै कवि थिए । त्यतिबेलाका कवि, लेखकले गीत त दिन्थे तर राम्रो छैन भन्यो भने अपजस आउने । बरु त्यसको साटो नयाँ प्रतिभाका राम्रा गीत छानेर गाएँ । नयाँ गीतकारहरूको मन नदुखोस् भनेर उनीहरूको गीत गाएँ ।
तपाईंले त ‘चौतारीमा राजा भेटियो…’ भन्ने राजाको गुनगान गाएको गीत पनि गाउनुभयो । तपाईं आजसम्म पनि खरो, कडा स्वभावको क्रान्तिकारी जस्तो हुनुहुन्छ । त्यो गीत राजावादी भएर गाउनुभएको कि के हो ?
वादी–सादी केही होइन म । त्यसरी गाएको होइन । फत्तेमान राजभण्डारी मेरो जिग्री साथी । ऊसँग मैले मेरो संगीतमा ‘सुन राम्रो, चाँदी राम्रो…’ गीत युगल गाएको थिएँ । त्यसैको पैंचो तिर्न उसले संगीत गरेको क्षेत्रप्रताप अधिकारीको गीत ऊसँगै युगल गाएको हुँ ।
पञ्चायतकालमा भक्तराज आचार्य बन्न निकै मिहिनेत गर्नुभयो है !
राधाप्रसाद घिमिरे सञ्चारमन्त्री भएर आएपछि २०३१ सालदेखि रेडियो नेपालमा मासिक २ सय रुपैयाँमा ९ वर्ष ज्यालादारीमा काम गरें । रागवेन्द्रप्रताप शाह सञ्चारमन्त्री भएपछि उनकै तोकआदेशमा सुब्बा बनाइदिए । त्यसको ६ महिनामा अधिकृत भएँ । सुब्बा भएपछि मलाई रेडियो नेपालका शत्रुहरूले जागिरबाट निकाल्न विशेष प्रहरीमा उजुरी पनि दिएका थिए । यो मान्छे भारतीय हो, यसको नागरिकता छैन, यो एजेन्ट हो भनिएको रै’छ उजुरी पत्रमा । त्यतिबेला राममणि रिसाल रेडियो नेपालका सहायक निर्देशक थिए । उनका गीत, भजन मैले गाएको पनि थिएँ । मेरा मिल्ने साथी पनि थिए । उनले विशेष प्रहरी प्रमुखलाई भेटेर ममाथि लगाइएको आरोप मिथ्या भएको बताएपछि मेरो जागिर बच्यो । अधिकृत भएको साढे ११ वर्षपछि राजीनामा दिन लगाइयो । अहिले मासिक ३४ हजार पेन्सन आउँछ । बाँच्नका निम्ति मैले गरेको त्यो संघर्ष भयानक थियो ।
संघर्ष, सफलता, जीवन के रै’छ ?
खासमा जन्मनु नै व्यर्थ छ । केही फाइदा छैन । सफल भयो भने छिर्के हान्छन्, असफल भयो भने कसैले चिन्दैन । केही गर्छु भनेर पनि फाइदा छैन ।
जीवनको सुन्दर पल र स्मरणीय दिन कुन हो तपाईंको ?
म महाअभागी मान्छे हुँ । र, पनि मेरो पहिलो गीत रेकर्ड हुनुलाई नै मेरो जीवनको सबैभन्दा सुन्दर पल र यात्राको सुरुआत मान्छु । यदि गाउन नपाएर डुवर्स फर्किनुपरेको भए मलाई कसैले चिन्दैनथे । म कहानीविहीन मान्छे हुन्थें । भारतीय, पाकिस्तानी गजल गायक मेहेदी हसन, गुलाम अली, सौकत अलीले मेरो गायकीको प्रशंसा गरेर आशीर्वाद दिए । ती दिनलाई म स्मरणीय दिन मान्छु ।
देशको राजनीतिक अवस्था कस्तो लाग्छ ? राजनीतिप्रति यहाँको धारणा के छ ?
मलाई घृणा छ । भ्रष्टाचार छ । आफ्नो पेट भरेर जनतालाई भोकै राख्ने काम नेताहरूबाट भएको छ । भाषण दिने मात्रै हाम्रा लागि हो । यी प्युसाहरूभन्दा त राजा नै ठीक थिए, कम से कम आफ्ना लागि मात्रै नभएर जनताका लागि केही गरेका पनि थिए । अघि नै भनें नि मैले– संगीतमा जस्तै राजनीतिमा पनि असुरहरूकै राज छ ।
Prevमलेशिया सरकारले गर्यो विदेशी श्रमिकको लेभी सम्बन्धमा यस्तो घो’षणा
Nextबुटवलमा हेर्नुहोस त । कतार भएका सोझा श्रीमा’नलाई नम’ज्जैले फसा’ इन। श्री’मती3जना केटा सँँग नेपालमा मो’ज